Khaladaadka Caadiga ah ee Ganacsiyadu Sameeyaan Markay Doortaan Madal Qalabaynta Suuqgeynta | Martech Zone
Khaladaadka Caadiga ah ee Ganacsiyadu Sameeyaan Markay dooranayaan Madal Qalab Suuq Geyn
Isniin, November 30, 2020 Isniin, November 30, 2020 Bob Croft
A suuq geynta suuq geynta (MAP) waa softiweer kasta oo iswada dhaqdhaqaaqyada waxqabadka suuqgeynta. Nidaamyadu waxay caadi ahaan bixiyaan astaamaha otomaatiga ee ku jira emaylka, warbaahinta bulshada, hoggaanka guud, boostada tooska ah, kanaalada xayeysiinta dhijitaalka ah iyo dhexdhexaadiyayaashooda. Qalabku wuxuu bixiyaa xog-ururin suuq-geyn oo loogu talagalay macluumaadka suuq-geynta si isgaarsiinta loola beegsado iyadoo la adeegsanayo kala-soocid iyo shaqsiyeyn.
Waxaa jira soo celin weyn oo ku saabsan maalgashiga marka suuqgeynta suuqgeynta si toos ah loo hirgeliyo oo si buuxda loo siman yahay; si kastaba ha noqotee, ganacsiyo badan ayaa sameeya khaladaadka aasaasiga ah markay dooranayaan barxada ganacsigooda. Waa kuwan kuwa aan weli sii arko:
Khaladka 1aad: MAP Kaliya Maahan Suuqgeynta Emailka
Markii ugu horreyn la soo saaray meheradaha suuqgeynta suuqgeynta, diiradda dhexe ee badankood waxay ahayd iswada isgaarsiinta iimaylka. Emailku waa kanaal aan qaali ahayn oo leh ROMI weyn oo ganacsatadu kala socon karaan soona sheegi karaan waxqabadkooda. Si kastaba ha noqotee, emaylku maahan midka kaliya ee dambe. Suuqgeyntu waxay ku saabsan tahay u dirista macaamiisha saxda ah farriinta saxda ah waqtiga saxda ah - iyo MAP-yada ayaa tan u oggolaanaya.
Tusaale: Waxaan dhawaan ka caawiyay macmiil inuu maamulo websaydhkooda iyagoo ka faa'iideysanaya meheraddooda otomatigga suuqgeynta. Laga soo bilaabo diiwaangelinta dhacdada ka hor, maalinta dhacdo-hubinta, illaa dabagal dhacdada ka dib - waxay ahayd nidaam otomaatig ah oo ku saabsan labada iimayl iyo kanaalada tooska ah. Nidaamka otomatiga ee suuqgeynta emailka kaligiis nama caawin doonin inaan la kulanno ujeeddooyinkeenna.
Khaladka 2aad: Khariidadda MAP lama jaanqaadin Ujeeddooyinka Suuq Weyn
Sannadihii aan soo maray ee aan sida dhow ula shaqeynayay macmiisha, macmiil kasta wuxuu lahaa fikirkiisa ku aaddan doorbididda barnaamijkooda. Inta badan, go'aan-qaadaha heerka C wuxuu si aad ah ugu tiirsanaa qiimaha barxadda iyo wax kale. Markii aan hubinayna tiknoolajiyadooda suuq geynta, waxaan aqoonsanay halka ay ku yaalliin qalabka laga isticmaalo - ama ka xun - oo aan haba yaraatee la isticmaalin.
Waxa ugu horreeya ee had iyo jeer la weyddiiyo marka la dooranayo MAP waa:
Maxay yihiin yoolalkaaga suuq-geynta 3 bilood gudahood?
Maxay yihiin yoolalkaaga suuq-geynta 12 bilood gudahood?
Maxay yihiin yoolalkaaga suuq-geynta 24 bilood gudahood?
Otomaatiga suuq geynta maahan eray caan ah oo buzz ah sidoo kale ma ahan rasaas qalin ah. Waa qalab kaa caawinaya inaad ku guuleysato yoolalkaaga suuq-geyn. Sidaa darteed, markasta oo aad weydiiso waxaad u baahan tahay si aad u gaarto oo aad u dejiso MAP-gaaga si aad toos ugula jaanqaado ujeedooyinkaaga suuq-geynta iyo cabiridda tilmaamayaasha waxqabadkaaga muhiimka ah (KPIs).
Tusaale: Macaamiilka elektaroonigga ah wuxuu doonayaa inuu kordhiyo dakhliga iyada oo loo marayo wadiiqooyinka emaylka maxaa yeelay taasi waxay kaliya marinaysaa ganacsiga hadda isticmaalaya waxayna leeyihiin xog ururin aad u ballaaran. Xitaa uma baahnaan karaan otomatik… adeeg bixiyaha emaylka (ESP) oo ay weheliso khabiir ku xeel dheer suuqgeynta iimaylka ayaa laga yaabaa inuu ku guuleysto dhammaan natiijooyinka. Maxay tahay ujeedka in lumiyo in kabadan 5 jeer miisaaniyada si loo isticmaalo MAP oo isla wax isku mid ah sameysa?
Khaladka 3aad: Kharashyada Ku-Meel Gaarka MAP Waa La Dhayalsaday
Sidee aqoon u leedahay kooxdaada? Awoodda ayaa laga yaabaa inay tahay qodobka ugu muhiimsan marka la maal-galinayo MAP, laakiin waxaa caadi ahaan iska indhatira ganacsiyada badan ee xulashada sameynaya. Si loo gaaro himilooyinkaaga suuq-geynta, waxaad u baahan tahay qof si buuxda u maamuli kara barxadda isla markaana ku fulin kara ololahaaga.
In kabadan kalabar macaamiishaydu waxay doorteen madal aan laheyn karti gudaha ah oo looga faa'iideysan karo. Natiija ahaan, waxay ku dambeeyaan inay lacag siiyaan hay'ad suuq-geyn ah si ay u maamusho. Kharashkaas wuxuu yareynayaa soo noqoshada maalgashiga xitaa wuxuu ka dhigi karaa khasaare. Hay'aduhu inta badan way ku fiican yihiin inay kaa caawiyaan hirgelinta MAP-gaaga, laakiin waa qiimo aad u sarreeya oo badan oo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ay ugu shaqeeyaan si joogto ah.
Ganacsiyada kale waxay doortaan inay kor ugu qaadaan xirfadahooda kooxda guriga ku jirta. Inta lagu jiro hawsha miisaaniyadda, in kastoo, in badan oo ka mid ahi waxay iloobaan inay qorsheeyaan kharashyada tababarka miisaaniyadda suuqgeynta. Xal kasta wuxuu u baahan yahay xirfado muhiim ah; sidaa darteed, kharashaadka tababarku way kala duwan yihiin. Marketo, tusaale ahaan, waa xal saaxiibtinimo leh kharashka tababarka aasaasiga ah ee kudhowaad $ 2000 AUD ee Australia. Beddel ahaan, Tababbarka Suuqgeynta Suuqgeynta Tababarka Cloud waa lacag la'aan Wadada.
Tixgeli kharashaadka hantidaada aadanaha iyo tababbarkooda markaad go aansato gogol.
Khaladka 4aad: MAP Qaybaha Macaamiisha oo aan la adeegsan
MAP waxay u kala saari kartaa rajooyinkaaga iyo macaamiishaada qaab kasta oo aad ugu baahato. Tani kuma koobna oo keliya waxyaabaha ku saabsan xogta aad hayso, laakiin sidoo kale si sax ah ayaa loo bar-tilmaameedsanayaa meesha uu macmiilku ku jiro safarkooda ama suuqgeynta nololeed ee suuqgeynta. U dirista farriinta saxda ah waqtiga saxda ah iyadoo kuxiran habdhaqankooda macaamiisha waxay kordhin doontaa qiimaha macaamilka… wadista kororka ROI-gaaga.
Intaa waxaa sii dheer, kuwa ugu waaweyn ee iibiya MAP waxay sameeyaan baaritaanka A / B si ay ugu fiicnaadaan natiijooyinka ololaha. Tani waxay kor u qaadi doontaa natiijooyinkaaga suuq-geynta… adoo hagaajinaya waqtiga iyo fariinta aad u direyso macmiilkaaga. Beegsiga qaybaha macaamiisha iyo habdhaqankooda, iyo kala saarista koox kasta oo dad ah waxay ka faa'iideysan doontaa kala duwanaanta habdhaqanka ee iibsadeyaasha.
Doorashada xalka saxda ah ee MAP waligiis ma fududaan oo tixgelinta waa in lagu sameeyaa wixii ka dambeeya kharashka barta. Dabcan, waxaa jira sababo kale oo badan oo maalgashigaaga MAP uusan bixin karin… laakiin uguyaraan 4-taan khalad ee caadiga ah waxay hagaajinayaan fursadahaaga inaad si buuxda u ogaato maalgashigaaga!
Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah oo ku saabsan doorashada mid ka mid ah, fadlan nala soo xiriir annaguna waxaan ku faraxsanahay inaan ku caawinno.
Tags: dhaqanka macaamiishaotomatiga emaylkafariinta suuq-geynta suuqaotomaatiga suuq geynta dhacdadatilmaamayaasha waxtarka muhiimka ahmapsuuq geynta suuq geyntaTababarka Suuq geyntamarketing mobileROI
Bob Croft waa hogaamiye khibrad khibrad u leh gudaha gobolka APAC, oo la shaqeynaya in ka badan 15 macmiil 8-dii sano ee la soo dhaafay waqtiga warshadaha kala duwan.
Faleebo: Waa maxay Maareeyaha Xiriirka Macaamiisha Ecommerce (ECRM)?